Iran oo heshay keyd saliid oo balaayiin fuusto ah - BBC News Somali
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in keydka cusub ee saliidda oo la helay ay seddex jibbaar sare u qaadeyso keydka saliidda dalkiisa uu leeyahay.
Keyd shidaalka cusub uu shaaciyey madaxweyne Ruuxaani ayaa la sheegay iney ku taallo gobolka Khuzestan ee ku yaalla Koonfurta galbeed ee dalka Iran, keydka saliida oo ku fadhiya dhul dhan 2,400 oo kiilo mitir isku wareeg ah, keydkaasi oo dhan 53 bilyan oo fuusto oo saliidda qeyriin ah.
Iran ayaa halgan ugu jirto sidi ay saliiddeeda dibadda ugu iib geyn lahayd maadaamaa Mareykanka uu cunaqabateyn uu ka saaray saliid iney dhoofiso.
Cunaqabateynadaasi oo Iran la saaray wixi ka dambeeyey marki uu Mareykanka ka baxay heshiiska Niyuukilarka caalamiga ay horay ula galeen Mareykanka iyo shan waddan oo ka mid ah quwadaha adduunka.
"Waxaan helnay dhul ay ceegaagto saliid qeyriin oo ka badan 53 bilyan oo Fuusto. Keydkaasi oo ceegaaga dhul dhan 2,400 kiilo mitir isku wareeg ah dhulkaasi oo u dhaxeeya Bostan ilaa iyo Omdiyeh. Gunta Keydka ay ku fadhidana waxay dhan tahay 80 miitir" ayuu yiri madaxweyne Ruuxaani xilli uu madaxweyne Ruuxaani uu shacab kula hadlayey bartamaha magaalada Yazd.
"Dakhliga Iran wuxuu sare u kacayaa ilaa iyo $32 bilyan oo doolar (oo u dhigma £25 bilyan oo gini) haddii aan keydkaasi 1% oo keli soo saaranno", ayuu ku sii daray.
"Aqalka cad ee Mareykanka waxaan u sheegayaa xilli aad idinku Iran cunaqabateyn ka saarteen saliiddeeda iney dibadda u iib geyso, shaqaalaha iyo injinneerrada dalka Iran waxay heleen keyd saliid oo ka badan 53 bilyan oo fuusto," ayuu yiri madaxweynaha sida laga soo xigtay Wakaaladda wararka ee Fars.
Wakaaladda wararka ee AP waxay sheegtay keydka saliidda ee la helay ay Iran ka dhigeyso keydki labaad ee saliidda ugu weyn uu dalka Iiraan leeyahay iyada oo keydka ugu weynaa oo horay loo helay uu ahaa 65 bilyan oo fuusto lagana helay deegaanka Ahvaz.
Iran ayaa waxay ka mid tahay waddamada caalamka ee soo saara saliidda ugu badan,waxayna Iran saliidda ay dibadda u dhoofiso sanad walba ka heshaa balaayiin doolar oo dakhli ah.
'Keydka saliidda uu leeyahay dalka Iran ayaa ah ku dhawaad 150 bilyan oo fuusto,; ayuu yiri madaxweyne Ruuxaani.
Waana dalka afaradaa ee leh keydka saliidda caalamka ugu weyn isla-markaana waa waddanka labaad ee haysta keydka gaaska dunida ugu badan, wuxuuna dalkaasi ku yaalla Gacanka Pershia oo dalka Qadarna uu ku yaallo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dib u soo celiyey cunaqabateynada Iran isaga oo sheegay iney Iran ku xadgudubtay heshiiski Niyuukilarka ee ay Iran iyo shanta waddan ee dunida ugu muruqa weyn ay wada galeen.
Sida uu dhigayey heshiiskaasina waxay Iran oggolaatay iney xaddiddo tayeynta Yuuraaniyamka isla-markaana baarayaal caalami ah ay dabagal ku sameeyaan arrimaheeda Niyuukilarka si Iran cunaqabateennada looga khafiifiyo.
Hase yeeshee, cunqabateynadaasi ayaa dhaqaalaha dalka Iran saameyn u geystay, qiimaha lacagta Iran oo hoos u dhacday, sicir bararka dalkaasi oo sara u kacay, waxayna sababeen iney maalgeliyeysha ajaanibta ah ay dalkaasi ka baxeen iyo iney dalkaasi mudaharaadyo ka dhacaan.
Dib u warshadeyn